ဒီဇင်ဘာ 2018 – BSI :: Bureau of Special Investigation
Monthly Archives: ဒီဇင်ဘာ 2018
Home > 2018 > ဒီဇင်ဘာ
ဒီဇင်ဘာ 21, 2018
Comments Off on (၆၇)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အမှတ်တရ ဆောင်းပါး
(၆၇)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အမှတ်တရ ဆောင်းပါး
စွမ်းရည် စွမ်းအား စွမ်းပကားများ အစဉ်ပြည့်နေဖို့
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် အမိန့်အမှတ် ၁၄၂/အိပ်ချ်-စီ ၅၁ ဖြင့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန အက်ဥပဒေအရ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနတို့မှ အရာရှိများသည် ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ဆန္ဒ၊ ဒေါသ၊ ဘယာ၊ မောဟ ဂတိများ သို့မလိုက် ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကျေကုန်အောင် ထမ်းရွက်ပါမည်ဟု လေးနက် တည်ကြည် မှန်ကန်စွာ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် – သစ္စံ ၊ ဓမ္မော ၊ ဓိတိ ၊ စာဂေါ ၊ ဇေယျော ဟု အဓိဌာန်ခဲ့သည် သာမက ဌာနဝင်များ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်နှင့် လက်စွဲဥပဒေကိုလည်း ပြဌာန်းခဲ့သည်၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အထူးစုံစမ်းစစ် ဆေးရေးဌာနအက်ဥပဒေ၊ လက်စွဲ ဥပဒေတို့၏ ဘောင်အတွင်းမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဌာနတွင်းဥပဒေအကြံပေးခြင်း၊ တရားစွဲတင်ခြင်းနှင့်တရားရုံးအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သတင်းထောက်လှမ်း စုဆောင်းတင်ပြခြင်းစသည့် အဓိကလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ် ဆောင်ရွက်ချက် (၁၉၅၁- ၁၉၅၈)
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်တွင် ဓာတ်ခဲများအတွင်း ရွှေချောင်းများ ထည့်သွင်းလာမှု၊ ငွေလွှဲလက်မှတ်အတု ဖြင့်ငွေများလိမ်လည်ထုတ်ယူမှု၊ အခွန်တိမ်းရှောင်မှု၊ ပြည်ပပို့ ကြေးနန်းများတွင် တံဆိပ်ခေါင်းမကပ်ဘဲ ငွေအလွဲသုံးမှု၊ တရားမဝင်ငွေများဖြင့် ရွှေချောင်းများ ခိုးသွင်းမှု၊ နိုင်ငံပိုင် ကျွန်းသစ်များ ခိုးခုတ်မှု၊ ပြည်တွင်း ရေကြောင်းပိုင် သင်္ဘောများ၏ မသမာမှု၊ တရားမဝင် ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှု၊ နိုင်ငံပိုင် နိုင်ငံခြားငွေများဖြင့် စိန်များတင်သွင်းမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူ ခဲ့သည်။
အိမ်စောင့်အစိုးရလက်ထက် ဆောင်ရွက်ချက်( ၁၉၅၈-၁၉၆၂)
အိမ်စောင့်အစိုးရလက်ထက်တွင် စွန့်စားမှု (Bravery) ၊ စေတနာရှိမှု (Sincerety)၊ စာရိတ္တကြံ့ခိုင်မှု (Integrity) တို့ကြောင့် လုပ်ငန်းများ ပိုမိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်း၊ စီးပွားရေးသမားများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ ပူးပေါင်းကျူးလွန်သည့် မသမာမှုများစစ်ဆေးခြင်း၊ သွင်းကုန်/ထုတ်ကုန် လိုင်စင်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့၊ မြူနီစီပါယ်အဖွဲ့၊ နိုင်ငံတော် ကောက်ပဲသီးနှံ ရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့များတွင် တွဲဖက်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်ထက်ဆောင်ရွက်ချက် (၁၉၆၂- ၁၉၇၄)
တော်လှန်ရေးကောင်စီ လက်ထက်တွင် ချစ်တီးကုလားများက တောင်သူ လယ်သမား များအပေါ် မတရားငွေတိုးချပြီး ဂုတ်သွေးစုပ်မှု၊ မြန်မာပြည် ပုလဲငုပ်ခြင်းနှင့် မွေးမြူရေး ဆင်ဒီကိတ် တာဝန်ရှိသူများ၏ နိုင်ငံခြားငွေများ လိမ်လည်မှု၊ အမြတ်ခွန်နှင့် အကောက်ခွန် ငွေများ လိမ်လည်မှု၊ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်အချို့နှင့် ဝန်ထမ်းများပူးပေါင်း ကျူးလွန်သည့်မသမာမှု၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများထံ ချဉ်းကပ်သတင်းရယူကာ စီးပွားရေး ကမောက်ကမ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်မှု၊ ကုန်သွယ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင် ငွေများကို ချက်လက်မှတ်အတုဖြင့် လိမ်လည် ထုတ်ယူမှု၊ ပုံနှိပ်တိုက် ပိုင်ရှင်များ၏ အမြတ်ခွန် တိမ်းရှောင်မှု၊ ကျောက်မျက်ရတနာများ ပြည်ပသို့ခိုးထုတ်ပြီး ရွှေချောင်းနှင့် ပစ္စည်းများခိုးသွင်းမှု၊ သတင်းစာ လောကတွင် ဖြစ်ပွားသည့် အထွေထွေ မသမာမှု၊ အခြေခံစားကုန်ဈေးနှုန်းများ အဆမတန် မြင့်မားအောင် လုပ်ဆောင်မှု၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရေးဆွဲပြဌာန်းရေး လုပ်ငန်းကို အနှောင့် အယှက်ပြုလုပ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေး အရေးယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်တွင် မိုးကုတ်ဒေသထွက် ကျောက်မျက်ရတနာများကို ဒေသ အာဏာပိုင်များနှင့် ကုန်သည်များပူးပေါင်း၍ ပြည်ပသို့ခိုးထုတ်မှု၊ ပါတီအရှိန် အဝါကိုသုံးပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာမှု၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ထားသည့် ငွေနှင့်ပစ္စည်းများ အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်မှု၊ ရွှေချက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ရွှေမှောင်ခိုများက ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်များပြုလုပ်၍ ပြည်ပခိုးထုတ်မှု၊ ရွှေဈေးကို အကြောင်းပြု၍ စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းများလိုက်ပါ မြင့်တက်အောင် ပြုလုပ်မှု၊ ရွှေချောင်းများ တရားမဝင်တင်ပို့ပြီး မှောင်ခိုကုန်များ တင်သွင်းသိုလှောင်မှု၊ လေကြောင်းဝန်ထမ်းများ၏ မသမာမှု၊ နိုင်ငံပိုင် ရေနံစိမ်းများ ခိုးယူရောင်းချမှု၊ တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့သည့် ဆန်များ လျော့နည်းပျောက်ဆုံးမှု၊ မြန်မာ့ရေပိုင်နက်မှ ငါးများ ခိုးဖမ်းရောင်းချမှုတို့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေး အရေးယူခဲ့ပါသည်။
ဦးစီးဌာန၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများမှာ တရားမျှတမှုနှင့် ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း သိရှိနိုင်စေရန် “စုံစမ်းခြင်းသည် အမှန်တရားကို ရှာဖွေခြင်း ဖြစ်သည်” ဟူသည့် ဆောင်ပုဒ်ကို ချိတ်ဆွဲခဲ့ပါသည်။
တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်ဆောင်ရွက်ချက် (၁၉၈၈- ၂၀၁၀)
တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက်တွင် မလေးရှားသံအမတ်ကြီး အမည်သုံး၍ စာရွက်စာတမ်း အတုများဖြင့် လိမ်လည်မှု၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဂျာမနီနိုင်ငံသံရုံး အမည်သုံး၍ ကုန်သေတ္တာများကို တရားမဝင်ထုတ်ယူရန် ကြိုးပမ်းမှု၊ မိုးကုတ်ဒေသထွက် ကျောက်မျက် ရတနာနှင့် ပတ္တမြားများကို ပြည်ပသို့ တရားမဝင် ခိုးထုတ်မှု (နဝတပတ္တမြားအမှု)၊ ရွှေချောင်းများ တရားမဝင် တင်သွင်းမှု၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ ပူးပေါင်း မသမာပြုလုပ်မှု၊ ပိုလျှံဘတ်ဂျက် ခွင့်ပြုငွေများ ပြန်မအပ်မှု၊ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ အလွဲသုံးစားမှု၊ CDMA(Fixed) ဖုန်းများကို CDMA(Mobile) ဖုန်းများအဖြစ် အခကြေးငွေရယူကာ တရားမဝင် ပြောင်းပေးမှု၊ စားအုန်းဆီများ တရားမဝင်တင်သွင်းမှု၊ ရေနံစိမ်းများ ခိုးထုတ်သယ်ဆောင်မှု၊ မြန်မာအမျိုးသမီးများကို ပြည်ပသို့ တရားမဝင် ထွက်ခွာစေမှု၊ နယ်စပ်ဒေသ ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့ရုံးနှင့် အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများ၏ မသမာမှုတို့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေး အရေးယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။
အရပ်သားအစိုးရ တက်လာသည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်ပမှ တယ်လီဖုန်း အဝင်ခေါ်ဆိုမှု (Incoming Call) များကို Voice Over Internet Production (VOIP) စနစ်အသုံးပြု၍ ပြည်တွင်းခေါ်ခိုမှု (Local Call)အဖြစ် တရားမဝင် နည်းလမ်းဖြင့် ပြောင်းလဲ ဆက်သွယ်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်၏ အခွန်ငွေများ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံ ငွေအကြောင်းပြကာ မြေကွက်များ မတရားရယူ ပိုင်ဆိုင်ထားမှု၊ အိမ်၊ ခြံမြေများ ဝယ်ယူ၍ ဈေးကစားမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်တင်သွင်းမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှု၊ ဆေးဝါးများ သိုလှောင် အတုပြုလုပ်မှု၊ ပြည်ပထုတ် လူသုံးကုန် ပစ္စည်းအချို့ကို အတုထုတ်လုပ် ရောင်းချမှု၊ ကျွဲ နွား မှောင်ခို ရောင်းဝယ်သူများက ပြင်ပမှောင်ခို လမ်းကြောင်းမှ သယ်ယူရောင်းချမှု၊ အစိုးရဌာနများ၏ စာတမ်းအမှတ် အသားများအား လိမ်လည်အတုပြုလုပ်မှု၊ နိုင်ငံခြား သင်္ဘောလိုက်ခွင့်လက်မှတ် (CDC စာအုပ်) အတုပြုလုပ် လိမ်လည်မှု၊ အထူးကုန်စည် ခွန်မဆောင်ဘဲ အရက်များ ဈေးကွက် ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အလုပ်အကိုင် ရရှိမည်ဆိုကာ ငွေကြေးလိမ်လည်မှု၊ လိုင်စင်မဲ့အရက်ပြန်များ ထုတ်လုပ် ရောင်းချမှု၊ မြေဂရန် အတုများသုံး၍ မြေကွက်လိမ်လည်ပေါင်နှံမှု၊ စာရွက်စာတမ်းအတုများဖြင့် မြေကွက်များ လိမ်လည် ရောင်းချမှု၊ Mobile Application သုံး၍ ပြည်သူများအား အစုရှယ်ယာများ လိမ်လည်ရောင်းချမှု၊ နိုင်ငံခြားသားများ ပြည်တွင်း၌ နေထိုင်ခွင့်ရရှိရေး ဗီဇာ သက်တမ်းတိုးနိုင်ရန် ရုံးစာအတုများ ပြုလုပ်မှု၊ ဆင့်ပွားကွန်ရက် ချိတ်ဆက် ရောင်းဝယ်သည့်စနစ် (MLM)အရ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီအချို့၏ ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှု၊ Bit coin အပါအဝင် လျှို့ဝှက်ငွေကြေး (Crypto currency) များကို onlineမှ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခု သတ်မှတ်၍ တရားမဝင် ရောင်းဝယ်မှုတို့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့က တာဝန်ပေးအပ်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုများ၊ သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေး အရေးယူလျက်ရှိသည်၊ အာရှပစိဖိတ်ဒေသ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ (APG)၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်း အပြန်အလှန် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်မှု များရရှိရေး ဌာနအရာရှိများက ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများ တွင်လည်း ဦးစီးဌာန ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် လတ်တလောတွင် ပြောင်းလဲလာသောခေတ် စနစ်နှင့်အညီ စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြစ်မှုများ စုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူရေး၊ ဝန်ထမ်းမသမာမှု များကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူရေး၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး သတင်းများ စုဆောင်းတင်ပြရေး၊ ပြည်သူ့ အကျိုးပြု ဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို ရည်မှန်းချက်များအဖြစ် ချမှတ်ထားပြီး စိစစ်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဥပဒေအကြံပေးခြင်း၊ တရားစွဲ တင်ပို့ခြင်းနှင့် တရားရုံးအမှုလိုက်ပါခြင်း၊ သတင်းများစုဆောင်း တင်ပြခြင်း၊ လုံခြုံရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် အဓိကလုပ်ငန်း တာဝန်များကို တည်ဆဲဥပဒေများ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
အစိုးရဌာနများတွင် အကြီးအကဲနှင့် ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်ထားမည့်သူများ၊ ပြည်ပသို့ ပညာတော်သင် သွားရောက်မည့်သူများ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားသူများ၊ ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လျှောက်ထားသူများ၊ သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ဘူးခြင်း ရှိ/မရှိ၊ အခွန်အကြေ ထမ်းဆောင်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ် လျက်ရှိပါသည်။
ဦးစီးဌာနချုပ်ရုံးရှိ ဥပဒေဌာနစုသည် ဌာနတွင်း ဥပဒေအကြံပေး သုံးသပ်ခြင်းအပြင် လွှတ်တော်များက ပြင်ဆင်ပြဌာန်းမည့် ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများက တင်သွင်းသည့်ဥပဒေ (မူကြမ်း)၊ နည်းဥပဒေ (မူကြမ်း)များကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ သုံးသပ်ခြင်း၊ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ တပ်ဖွဲ့နှင့် ဦးစီးဌာနများ၊ အခြားဝန်ကြီး ဌာနနှင့်အဖွဲ့များက ကျင့်သုံးနေသည့် ဥပဒေများ၊ အသစ်ပြဌာန်းမည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများမှာ လက်တွေ့ အခြေအနေနှင့် ဆီလျော်စည်းနှောင်မှု ရှိ/မရှိ၊ အများပြည်သူ လက်ခံလိုက်နာ နိုင်မှုရှိ/မရှိတို့ကို သုံးသပ်ခြင်းတို့ကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး သဘောထား မှတ်ချက်များ၊ အကြံပြုချက်များ ပေးပို့လျက်ရှိပါသည်၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက မေးမြန်းလျက်ရှိသော အဆိုနှင့် မေးခွန်းအချို့ကိုလည်း ဖြေကြား၍ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြုစုတင်ပြပေးပို့ လျက်ရှိသည်၊ လက်ရှိတွင် ဥပဒေနှင့် အကျိုးဆောင်ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး သည် ပြည်ထောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူ ပေးရေးအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဦးစီးဌာန အကြီးအကဲများသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးတို့၏ လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူကာ လုပ်ငန်းတာဝန်များအပြင် ဌာနဝင်ဝန်ထမ်းများ သတ်မှတ်ရာထူး ကာလပြည့်ပါက တစ်ဆင့်မြင့်ရာထူး တိုးမြှင့်ရရှိရေး၊ ဝန်ထမ်းအင်အား တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး၊ အမှုဆောင် ဝန်ထမ်းများသည် (၂၄)နာရီ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည့် ဝန်ထမ်းများဖြစ်၍ အခြားတပ်ဖွဲ့နှင့်ဌာနများနည်းတူ ရိက္ခာငွေခံစားနိုင်ရေး၊ တိုးချဲ့လာသည့် ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့်အညီ လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်နှင့် မိသားစုဝင်များ အတူတကွ နေထိုင်နိုင်စေရန် ရုံးအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ထမ်း အိမ်ရာများ တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်နိုင်ရေး၊ မိသားစုလူမှုရေး အခက်အခဲများ ပြေလည်စေရန် တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကြိမ် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် ရယူကာပြောင်းရွေ့နိုင်ရေးတို့ကို စေတနာ အပြည့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်၊ အမှုဆောင်ဝန်ထမ်းများ၏ တူညီဝတ်စုံတွင် တပ်ဖွဲ့ အသွင်ဆောင်သည့် ဦးစီးဌာန အဆင့်အတန်းနှင့် လျော်ညီသော ရာထူးအဆင့် တံဆိပ်များ၊ ဦးစီးဌာန အမှတ်အသား တံဆိပ်များကိုလည်း တပ်ဆင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအား ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ တို့မှဖွင့်လှစ် သည့် သင်တန်းများ၊ ပြည်ပသင်တန်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများမှ လာရောက်ပို့ချသည့် သင်တန်းများသို့ စေလွှတ်လျက် ရှိသည့်အပြင် လုပ်ငန်းစွမ်းရည် မြင့်မားတိုးတက်စေရေး၊ ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ တိုးတက် ကျယ်ပြန့်လာသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နည်းပညာရပ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးနိုင်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး တို့ရည်ရွယ်၍ တောင်ငူမြို့ရှိ ဦးစီးဌာနရုံးဟောင်း နေရာတွင် ‘စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အတတ်ပညာ သင်ကျောင်း’ ကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ မှစ၍ သင်တန်းများ ပို့ချပေး နိုင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
ဦးစီးဌာနဝင် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ဌာနကြီးစတင် ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းက ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခဲ့ရသကဲ့သို့ မျက်မှောက်တွင်လည်း ကတိသစ္စာမပျက် စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာစွာရပ်တည် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြစေရန် သစ္စာလေးချက် ရွတ်ဆို၍ နိုင်ငံတော်အလံအောက်တွင် နေ့စဉ်သစ္စာပြု လျက်ရှိသည်။
ဦးစီးဌာနကြီး၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားမှန်ကန်မှုကြောင့် အစိုးရအဆက်ဆက်၏ ယုံကြည် အားကိုးမှု ရခဲ့သည့်အပြင် ပြည်သူအများအကြား လူရိုသေ ရှင်ရိုသေ အဖွဲ့ကြီးအဖြစ် ယနေ့တိုင် ရပ်တည် နိုင်လျက် ရှိပါသည်၊ မျိုးဆက်သစ် ဌာနဝင်များ အနေဖြင့်လည်း ဌာနကြီး အစဉ်အလာမပျက် ရေရှည်ရပ်တည် နိုင်စေရန် တစ်ဦးချင်း စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလာစေရေး၊ အဖွဲ့အစည်း၏ စွမ်းအားများ ကြီးမားတိုးတက် လာစေရေး၊ ဌာနဝင်အချင်းချင်း စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာမှ အောင်မြင်မှုများ ဆတိုးရစေမည့် စွမ်းပကားများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေး အစဉ်သတိချပ်ကြိုးပမ်း နေကြရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
(၆၆)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဂုဏ်ပြုဆောင်းပါး
“မွှေးဆဲကြိုင်ဆဲ လှိုင်ဆဲ စံပယ်”
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန(စစစ)စသုံးလုံးသည် အထူးဖွဲ့စည်းထားသည့် ဌာနဖြစ်ပြီး စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် ၁၉၅၁ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့မှစ၍ လူရိုသေ ရှင်ရိုသေ အဖွဲ့အစည်း အဖြစ်အစဉ်ရပ်တည်ခဲ့သည့်၊ တပ်ဖွဲ့အသွင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ဌာနနှင့် လက်နက်ကိုင်ဦးစီးဌာနဖြစ်နေခြင်းက အခြားဦးစီးဌာနနှင့်မတူ တမူထူးခြားနေတော့သည်။
ဌာနစတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းကပင် ကောင်းမွန်သော ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်များထားရှိခဲ့သည်၊ ပြောင်းလဲလာသည့် ခေတ်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းတာဝန်များအပေါ်မူတည်၍ ရည်မှန်းချက်များပြောင်းလဲချမှတ်ခဲ့ရသည်၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြစ်မှုများ စုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူရေး၊ ဝန်ထမ်းမသမာမှုများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူရေး၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ သတင်းစုဆောင်းတင်ပြရေးနှင့် ပြည်သူ့အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ရေးတို့သည် လတ်တလောချမှတ်ထားသည့် ဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များပင်၊ ရည်မှန်းချက်ပြောင်းလဲလာသလို ဌာန၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များလည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့လေသည်။
ယခင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဌာနတွင်း ဥပဒေအကြံပေးခြင်းလုပ်ငန်း၊ တရားစွဲတင်ခြင်းနှင့်တရားရုံးအမှုလိုက်ပါခြင်းလုပ်ငန်း၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ သတင်းများ စုဆောင်းတင်ပြခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များအဖြစ် ချမှတ်ခဲ့သော်လည်း တိုးတက်လာသည့်ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ ကုမ္ပဏီနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ စိစစ်ပေးရမှု များလာခြင်း၊ ဌာနတွင်းဥပဒေအကြံပေးမှုများသာမက မိခင်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအပြင် အခြားဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့တို့၏ အသစ်ပြဌာန်းမည့် ဥပဒေများ၊ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲမည့် ဥပဒေများအတွက်ပါ ဥပဒေအကြံပေးနေရခြင်း၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် အခမ်းအနားများနှင့် ပွဲတော်များတွင် လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေခြင်းတို့ကြောင့် စိစစ်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဥပဒေအကြံပေးခြင်း၊ တရားစွဲတင်ခြင်းနှင့် တရားရုံးအမှုလိုက်ပါခြင်း၊ သတင်းထောက်လှမ်းစုဆောင်းတင်ပြခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို အဓိကလုပ်ငန်းအဖြစ်သတ် မှတ်ခဲ့ပါသည်၊ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း မူဝါဒများ ချမှတ်ပေးထားပေသည်။
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းမျာ၏ အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ၊ စီးပွားရေးမသမာမှုများ၊ အများပြည်သူထိခိုက်နစ်နာမှုများကို အဓိကထားစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို ၁၉၄၈ခုနှစ် အဂတိလိုက်စားမှုတားမြစ်ရေးဆိုင် ရာအက်ဥပဒေနှင့်တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့ပြီး အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကို သီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့လေသည်၊ ယင်းနောက်တွင် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကသာ အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပေသည်၊ သို့ရာတွင် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ UNODC၊ UNDP၊ UNAFEI တို့အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံဆွေးနွေးခြင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက် ဖျက်ရေးကွန်ဗင်းရှင်း (UNCAC) အကောင်အထည်ဖော်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဒုတိယစက်ဝန်း(၂၀၁၆−၂၀၂၀)တွင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ (Governmental Expert Team)တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ပြီး ဌာနဝင်အရာရှိများက လုပ်ငန်းကော်မတီများတွင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကာ အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ချက် (SAC)တွင် စိစစ်သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များ ပေးပို့ရလျက်ရှိပါသည်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစီမံကိန်း(Country Programme) ၂၀၁၅−၂၀၁၈အား UNODC နှင့်ပူးပေါင်း၍ စီမံကိန်း(၅)ခုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စီမံကိန်း(၂)၏ လုပ်ငန်းကော်မတီတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဥက္ကဌနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှုး(ဥပဒေနှင့်အကျိုးဆောင်ဌာန)က အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ကော်မရှင်က အကူအညီတောင်းခံလာပါက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေရပါသည်၊
ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟို အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေပြီး ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ စိစစ်မှုများ၊ စစ်ဆေးမှုများတွင် ဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေရပေသည်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၁၇ခုနှစ်မေလအထိ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့က စုစုပေါင်း(၁၀၉)မှု တာဝန်ပေးခဲ့ရာတွင် (၉၂)မှု ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် FATF နှင့်APG တို့၏ အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်၊ FATF၏ အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းမှာ တိုးတက်လာသဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အပါအဝင် နိုင်ငံကြီးများ၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ မှုများ ဖြေလျော့ပေးခဲ့ခြင်းမှာ ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ အရေးပါသည့် ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဦးစီးဌာနသည် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီခောတ်၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခောတ်၊ တပ်မတော်အစိုးရအဆက်ဆက်မှသည် လက်ရှိအရပ်သားအစိုးရအဖွဲ့အထိ ယုံကြည်အားထားရသည့် အဖွဲ့အစည်း အဖြစ်ရပ်တည်လာခဲ့ပြီး စစ်ဆင်ရေးအသွင်ဖြင့်တစ်မျိုး၊ လူစိတ်ဝင်စားသည့် အမှုကြီးများတစ်ဖုံ၊ အစုံစုံကို ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် သတိကြီးကြီးထား၍ ပိပိရိရိဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ လက်ရှိတွင်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တို့က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တာဝန်ပေးအပ်ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကတစ်ဆင့် ပြန်လည်တာဝန်ပေးအပ်မှု၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက တိုက်ရိုက်တာဝန်ပေးအပ်မှု၊ ဦးစီးဌာနက သတင်းစုဆောင်းရရှိချက်ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြခဲ့သည့်အပေါ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကပြန်လည်တာဝန်ပေးအပ်မှု၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့များက တင်ပြချက်များအပေါ် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် တာဝန်ပေးအပ်မှုတို့ကို ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စေ့စပ်သေချာစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ပြန်လည်တင်ပြလျက်ရှိသည်၊ အရေးယူရမည့် အခြေအနေတွင်လည်း ဥပဒေအရ တိကျသေချာစွာအရေးယူလျက်ရှိပေသည်။
ဦးစီးဌာနသို့ တာဝန်ပေးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလအထိ အမှုပေါင်း (၉၅) မှု တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး (၈၇) မှု ပြီးပြတ်အောင်ဆောင်ရွက်ထားနိုင်ပြီးဖြစ်သည်၊ စစ်ဆေးခဲ့သည့် အမှုများအနက်မှ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ်သန်း (၈၀၀၀) ကျော်ဖိုးရှိ မြေ၊ တိုက်ခန်း၊ ယာဉ်ယန္တရား ပစ္စည်းများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၉၀၉၆၃.၄၈)၊ စင်္ကာပူဒေါ်လာ (၃၇၀)၊ မလေးရှားရင်းဂစ် (၂၈၅၃၄)၊ ယူရိုငွေ (၃၃၀၀၀)၊ ဂျပန်ယန်း (၅၂၆၁၀၀၀)၊ တရုတ်ယွမ်ငွေ (၃၃၁၉၃)၊ ပေါင်စတာလင် (၆၁၀)၊ ကိုရီးယားဝမ် (၁၀၀၁၀၀၀)၊ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ (၁၇၁၀၀) တို့ကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပေသည်။
တိုးပွားလာသည့် လူဦးရေ၊ တိုးချဲ့လာခဲ့ရသည့်မြို့နှင့်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာများကြောင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားကိုလည်း ချဲ့ထွင်ခဲ့ရပေသည်၊ ဦးစီးဌာနစတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားမှာ ရာဂဏန်းသာရှိရာမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ ၂၇၀၀ ကျော်အထိ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်သည်၊ အဆင့်အတန်းအလိုက် ရာထူးအဆင့်တံဆိပ်များလည်း အမြင်တင့်ဖွယ်တူတူတန်တန်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါသည်၊ တိုးချဲ့လာသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားနှင့်အညီ ဦးစီးဌာနချုပ်ရုံးအပြင် ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ရုံးများနှင့်ဝန်ထမ်းများ နေထိုင်နိုင်ရေးအိမ်ရာများလည်း တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဆောက်လုပ်ဆဲလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဦးစီးဌာနအကြီးအကဲအဆက်ဆက်၏ အမြော်အမြင်ကြီးမားမှု၊ စေတနာကောင်းမွန်မှု၊ ဌာနနှင့် ဝန်ထမ်းများအပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးမှု၊ လက်အောက်ဝန်ထမ်းများ၏ ဌာနကြီးလူရိုသေရှင်ရိုသေအဖြစ် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူများက ယုံကြည်ကိုးစားအားထားလာစေရေး ဦ:စီးဌာနအကြီးအကဲများ၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ မနေမနားအားထုတ်ကြိုးစားမှု၊ မီးကုန်ယမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီး မလွန်ဆန်နိုင်သည့် သဘာဝတရားအရ အငြိမ်းစားယူသွားကြရသော်လည်း ထုထည်ကြီးမားသည့်သံယောဇဉ်ကြောင့် ပြင်ပမှဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးအားကောင်းလွန်းသည့်အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းကြီးငယ်များ၏ အထောက်အပံ့များကလည်း သန့်ရှင်းသည့်လေပြေအကြား အမွှေးရနံ့များသင်းပျံ့သည့် ဦးစီးဌာနအဖြစ် (၆၆) နှစ်ပြည့်သည့်တိုင်ရပ်တည်စေခဲ့ပေသည်၊ ကျွဲရိုင်းတို့မည်သည် အန္တရာယ်ပြုမည့်အရောင်သွေးကိုမြင်က ချိုအစုံကိုအစွမ်းကုန်ဖွင့်၍ တိုးဝှေ့သကဲ့သို့နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူအကျိုးနစ်နာသည့်၊ နစ်နာရမည့်အရေအတွက် စသုံးလုံး တို့သည် အစွမ်းရှိသမျှ တက်စုံရွက်ကုန်ဖွင့်၍ ဆင်ခြင်၍၊ မြော်မြင်၍၊ စာနာ၍၊ ဆထက်ထမ်းပိုးကြိုးစားနေကြလိမ်းဦးမည်၊ စံပယ်တို့၏ရနံ့သည် လေထက်လေညာဆက်လက်မွှေးပျံ့နေလေဦးမည်ဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ 18, 2018
Comments Off on ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ တင်ဒါထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ တင်ဒါထုတ်ပြန်ချက်
ဒီဇင်ဘာ 12, 2018
Comments Off on ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး၊ ကျောင်းဝတ်စုံနှင့်ကျောင်းသုံး စာရေးကိရိယာ ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး၊ ကျောင်းဝတ်စုံနှင့်ကျောင်းသုံး စာရေးကိရိယာ ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာ၊ ဝန်ထမ်းသား၊ သမီးများမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွင်း တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သည့် ဂုဏ်ထူးရ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ (၁၃:၀၀)အချိန်တွင် နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၄၉)ရှိ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွင်း တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သည့် (၆)ဘာသာ၊ (၅)ဘာသာနှင့် (၄)ဘာသာ
ဂုဏ်ထူးရှင်ကျောင်းသား(၃)ဦးတို့အား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ငွေပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သည့် ဂုဏ်ထူးရကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကိုယ်စား အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရုံးမှ ဦးစီးအရာရှိ(စုံစမ်းရေး) ဦးဝင်းမြင့်လွင်၏ သမီးဖြစ်သူ (၆)ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မဝင်းဝါခိုင်မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားကို (၁၄:၀၀)အချိန်တွင် ပြီးဆုံးပါသည်။
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းသား၊ သမီးများမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွင်း တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ (၅၀)ဦးရှိသည့်အနက် စုစုပေါင်း (၃၁)ဦး အောင်မြင်ခဲ့ပြီး (၆)ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် (၁)ဦး၊ (၅)ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် (၁)ဦး၊ (၄)ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် (၁)ဦး၊ (၃)ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် (၃)ဦး၊(၂)ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် (၂)ဦး၊ (၁)ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် (၅)ဦးနှင့် ရိုးရိုးအောင်မြင်သူ (၁၈)ဦးတို့ဖြစ်ပြီး အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း (၆၂%) ဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ 8, 2018
Comments Off on For Your Knowledge
Observation of Closing Ceremony at Training School for Special Investigation
Refresher Course for Investigators2/ 2018 was held from 16 -7 – 2018 to 7- 9- 2018 at Trainig School for Special Investigation. Deputy Director General U Thein Naing Htun attended the Closing Ceremony on 7-9-2018 and gave Closing Remarks and gave awards to the trainees.
2 . 67th Anniversary of the Bureau was observed
Office No (49) Naypyitaw
Chin State Office
Sagaing Region Office
Bago Region Office
Mandalay Region Office
Mon State Office
Rakhine State Office
Yangon Region Office
Irrawaddy Region Office
providing the birth expenses to the Upper Division Clerk Daw Kyu Kyu Lin.
Explaining about the State Flag Laws and Rules.
providing the birth expenses to the Assistant Computer Operator Daw Nwel Ni Win.
ဒီဇင်ဘာ 7, 2018
Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ရဲအရာရှိလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း ဒုတိယရဲအုပ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၉၂/၂၀၁၇) ရဲသူရိန်တပ်ခွဲ (အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန) သင်တန်းဆင်းပွဲနှင့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ရဲအရာရှိလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း ဒုတိယရဲအုပ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၉၂/၂၀၁၇) ရဲသူရိန်တပ်ခွဲ (အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန) သင်တန်းဆင်းပွဲနှင့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ရဲအရာရှိလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း ဒုတိယရဲအုပ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၉၂/၂၀၁၇) ရဲသူရိန်တပ်ခွဲ (အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန) သင်တန်းဆင်းပွဲနှင့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက် (၀၈၀၀) မှ (၀၈၃၀) အချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် (ဇီးပင်ကြီး) ရဲအရာရှိလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း ဗဟိုခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွန်ချုပ် ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း တက်ရောက်၍ သင်တန်းဆင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးကျောင်းသားဆုရရှိသူ စ/၂၁၉၀ ဒုစုံမှူး နေထွန်းလင်း၊ ဥပဒေဘာသာရပ် ထူးချွန်ဆုရရှိသူ စ/၂၂၉၂ ဒုစုံမှူး ဥမ္မာစိုးတို့အား ဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့်ပြီး၊ သင်တန်းသားများကိုယ်စား သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များကို စ/၂၁၄၅ ဒုစုံမှူး ရဲရင့်ဇော်တို့အား ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားသို့ ရဲအရာရှိလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ကြီး ယာယီရဲမှူးချုပ် မျိုးမင်းထိုက်၊ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး ရဲမှူးကြီး ကျော်ထွန်း၊ နည်းပြမှူးချုပ် ယာယီရဲမှူးကြီး တင့်ဆွေ၊ ဗဟိုမီးသတ်သင်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒုတိယညွန်ချုပ် ဦးကြည်ဝင်း၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ညွန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးများ၊ ရဲအရာရှိလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှ ဌာနမှူး/ဌာနခွဲမှူးများ၊ တပ်ခွဲမှူးများ၊ သန္ဓေနည်းပြအရာရှိများ၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ သင်တန်းသား (၂၅၅)ဦး၊ သင်တန်းသူ (၅၈)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၁၃) ဦးနှင့် မိဘဆွေမျိုးများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ 6, 2018
Comments Off on စသုံးလုံး
၁။ စစ်ပြီးခေတ်တွင်၊ မြန်တစ်ခွင်ဝယ်
၂။ လေးဆယ့်ရှစ်ခု ‘ရဲ’ တစ်စုဖြင့်
သန့်မှုရှည်ကာ ‘ခြ’ သတ္တဝါကို
၃။ ရဲနှင့်မဆိုင်၊ ဘီအက်စ်အိုင်သို့
၄။ ဘီအက်စ်အိုင်ဟု ခေါ်တွင်မူကား
၅။ ‘စသုံးလုံး’ ဝင် ပုဂ္ဂိုလ်စင်သည်
၆။ သစ္စာစကား မြဲမှတ်ထားကာ
၇။ ‘ခြံ’ ကောင်းမျိုးစုံ အဖုံဖုံကို
ပြုသည့်တာကြောင့် ယုတ်မာလူစု၊ ရန်ညိုးပြု၏။
၈။ ရန်ညှိုးသွယ်သွယ်၊ တွေ့ကြုံကြွယ်လည်း
၉။ လူထုဆက်သွယ်၊ ပေါင်းရာဝယ်လည်း
၁၀။ မြန်ပြည်သန့်ရှင်း၊ ‘ခြ’ ကောင်ကင်းရန်
စုံထောက်(အရာရှိ) သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၈၃/၂၀၁၈) သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ လှော်ကားရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ရဲအကြပ်အတတ်သင်ကျောင်း၊ လှော်ကားရတနာ ခန်းမတွင် ၂၄-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (၀၈:၃၀) အချိန်မှ (၀၉:၀၀) အချိန်ထိ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ(စုံစမ်းရေး)နှင့်စုံစမ်းရေးမှူး အရာရှိ သင်တန်းသား/သူများ တက်ရောက်သည့် စုံထောက်(အရာရှိ) သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၈၃/၂၀၁၈) သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့၊ ယာယီရဲမှူးချုပ် စိုးနိုင်ဦး က သင်တန်းဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး အခမ်းအနားသို့ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးနောင်ဦး၊ သတင်းနှင့် နည်းပညာဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဆွေ၊ ရဲလေ့ကျင့်ရေး ကျောင်းအုပ်ကြီး ရဲမှူးကြီး ကိုကိုအောင်၊ ဒုကျောင်းအုပ်ကြီး ဒုရဲမှူးကြီး ဝင်းဖေအောင်၊ နည်းပြမှူးချုပ် ဒုရဲမှူးကြီး မြတ်အောင်နှင့် ရဲလေ့ကျင့်ရေးဌာနမှ ရဲမှူးများ၊ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ (အင်းစိန်)မှ လေ့ကျင့်ရေး ဌာနခွဲမှူး ဒုရဲမှူးကြီး ဌေးအောင်၊ ဌာနခွဲမှူး(၂) ဒုရဲမှူးကြီး သာထွန်းနှင့် သင်တန်းနည်းပြ ရဲမှူး၊ ဒုရဲမှူးများ၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးသက်စိုး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းဦး၊ ဦးအောင်စိုးမင်းနှင့် သင်တန်းကြီးကြပ်သူ ဦးစီးအရာရှိများ စုစုပေါင်း (၂၅) ဦးနှင့် သင်တန်းသား/သူ အရာရှိ (၁၈၃)ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ စုံထောက်(အရာရှိ) သင်တန်းကို ၂၄-၉-၂၀၁၈ မှ ၂၂-၃-၂၀၁၉ ထိ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Comments Off on တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်စနစ်ကြားမှာ သတိပြုရမယ့် ဒီဂျစ်တယ်လ်ငွေကြေး
တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်စနစ်ကြားမှာ သတိပြုရမယ့် ဒီဂျစ်တယ်လ်ငွေကြေး
ငွေကြေးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာနည်းပညာ (Financial Technology) များသည် ခေတ်နှင့်အညီ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေခဲ့ရာ ရှေးယခင်က ကုန်ပစ္စည်းအချင်းချင်းဖလှယ်ခြင်းစနစ် သုံးစွဲခဲ့ရာမှ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဒင်္ဂါးပြားများ၊ ငွေစက္ကူများကို တစ်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသုံးစွဲလာ ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲလာခြင်းနှင့်အတူ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်း များ ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုမှာလည်း လွယ်ကူမြန်ဆန်ကျယ်ပြန့်လာစေရေး အတွက် အင်တာနက်နည်းပညာကို အခြေခံအသုံးချကြပါသည်။ Mobile Banking နည်းပညာများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့့််သုံးစွဲလာသလို ငွေကြေးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုအဖြစ် အနေနှင့်လည်း အဆင့်မြင့်ကွန်ပျုတာနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် Block Chain နည်းပညာ အခြေခံကာ အသုံးပြုထားသော Cryptocurrency (ခ) Digital Currency ဟု ခေါ်ဆိုကြသည့် ကိုင်တွယ်၍မရသောငွေကြေးစနစ် (Digital Money) ဒီဂျစ်တယ်လ်ငွေကြေးတစ်မျိုးမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်စတင်ပေါ်ထွက်လာပြီး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေနယ်ပယ်၌ တစ်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသုံးစွဲလာနေ သည်ကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။
ယနေ့ခေတ်ကာလ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေနယ်ပယ်၌ Cryptocurrency (ခေါ်) Digital Currency ဒီဂျစ်တယ်လ်ငွေကြေးများ အများအပြားထွက်ပေါ်လာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သုံးစွဲသူအချင်းချင်း လက်ခံကြသည့် သမားရိုးကျရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်သော Cryptocurrency (ခ) Digital Money (ခ) Coin စနစ်သည်လည်း ပေါ်ပေါက်လာပြီး Cryptocurrency Coin စနစ်သုံးစွဲမှုမှာ အစိုးရများ ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိဘဲ ယင်းစနစ်ကိုသဘောကျလက်ခံသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းသာ သုံးစွဲနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Cryptocurrency Coin များအား ၀ယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုသူ အချို့မှာ လတ်တလောအမြတ်အစွန်းအများအပြားရနေခြင်း၊ Online စနစ်ကိုအခြေခံထားသဖြင့် ငွေကြေး ထိန်းသိမ်းရမှုမရှိခြင်း၊ လွှဲပြောင်းရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်မရှိသလောက်နည်းပါးခြင်း၊ အခွန် ပေးဆောင်ရမှုမရှိခြင်း၊ ငွေလွှဲသည့် အချိန်ကုန်ကျမှုသက်သာခြင်း စသည်တို့အပြင် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအသီးသီး၏ထိန်းချုပ်နှောင်ဖွဲ့မှု ကင်းလွတ်ကာလွတ်လပ်သည့် အခြေအနေတွင်ရှိနေသဖြင့် ဥပဒေနှင့် လွတ်ကင်းနေသည့်သဘောမျိုးဖြစ်နေသည့်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် Crypto-currency Coin လက်ဝယ်ရှိသူများသည်လည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြု လာနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပေါ်ပေါက်လာပုံသမိုင်းကြောင်းကို ပြန်လည်လေ့လာမည်ဆိုပါက Crypto-currency (ခ) Digital Currency နှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်အမည် ဆာတိုရှီနာကာမိုတို ဟု ခေါ်တွင်သည့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က Digital Currency နည်းပညာတစ်ခုအား ကမ္ဘာသို့ စာတမ်း တစ်စောင်အား ချပြခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါနည်းပညာတွင် Digital Currency ငွေကြေးတစ်ခုအား Block Chain System ကို အသုံးပြု၍ အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာများနှင့် တည်ဆောက်ထားသော Network ကွန်ရက်တစ်ခုအား တည်ဆောက်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Digital Currency တစ်မျိုးပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ဖေါ်ပြပါလုံခြုံသည့်Network ကွန်ရက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီး Coin များကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ Coin များထုပ်လုပ်သည်ကို နည်းပညာ အခေါ်အရ Minning ပြုလုပ်သည် (ခ) သတ္တုတူးဖေါ်သည်ဟု တင်စားခေါ်ပါသည်။ Coin များ ထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်သက်တမ်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ (၂၅)နှစ်အထိနှင့် Coin အရေ အတွက်ကိုလည်း (၂၁)သန်းသာ ထုတ်လုပ်ရန်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားပါသည်။ Digital Currency နှင့်ပတ်သက်၍ စာတမ်းရေးသားကာ နည်းပညာတီထွင်သူအမည်အား ဆာတိုရှီနာကာမိုတိုဟု အလွယ်တကူခေါ်ဝေါ်ကြသော်လည်း မည်သူမှန်းမသိရှိကြဘဲ ၎င်းတို့အဖွဲ့က ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Bitcoin အမည်ဖြင့် Cryptocurrency တစ်ခုကို စတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအချိန် တွင် စီပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ငွေစာရင်းအလွှဲအပြောင်းပြုလုပ်ရာ၌ Online တွင် Exchange များမှတစ်ဆင့် Bitcoin ဖြင့် အပြန်အလှန်အသုံးပြုကြပြီး အခြားငွေကြေး အမျိုးအစားများနှင့်လည်း လဲလှယ်ရောင်း၀ယ်နေကြပြီး အောင်မြင်နေသည့် ဒီဂျစ်တယ်လ်ငွေကြေး တစ်မျိုးအဖြစ် ကမ္ဘာ့စီပွားရေးနယ်ပယ်တွင် စိတ်၀င်စားမှုများပြားလာခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် Bitcoin ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်ပိုင်း Cryptocurrency Coin အများအပြား တစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာရာ လက်ရှိစျေးကွက်ဝင် Initial Coin Offering (ICO) Coin အမျိုးအစားပေါင်း(၁၃၀၀)ကျော်ခန့် ရှိနေသော်လည်းများ လူသိများသော၊ စိတ်ဝင်စားမှုများသော Coin များမှာ Bitcoin (BTC) ၊ Ethereum (ETH) ၊ Ripple (XRP)၊ Bitcoincash(BCH)၊ Litecoin(LTC)၊ Tron(TRX)၊ Ethereumclassic(ETC)၊ Qtum(QTUM) စသည်တို့ဖြစ်ပြီး ရောင်း၀ယ်မှုလည်း အများဆုံးတွေ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် Cryptocurrency Market Capitilati-zation စျေးကွက်မဖွင့်သေးသည့် Pre Initial Coin Offering (Pre ICO) Coin အမျိုးအစား အချို့လည်း မြင်တွေ့နေရပြီး စျေးကွက်၀င်သယောင်ယောင် အသုံးအနှုန်းများသုံး၍ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်း သည့် နိုင်ငံအချို့တွင် ပြည်တွင်းရှိလူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် Company အချို့က နိုင်ငံခြားသားများ ခေါ်ဆောင် လာ၍ ဟော​ပြောစည်းရုံးပွဲများအား ဟိုတယ်ခန်းမကြီးများ၌ ပြုလုပ်နေသည်ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၌ပင် မြင်တွေ့နေရသည်ကို သတိထားမိနေပါသည်။ အဆိုပါ Cryptocurrency Coin ရောင်းဝယ် နေသည့် အမည်ခံပြည်တွင်းရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် Company အချို့ရှိနေပြီး လက်ရှိတွင်လည်း ငွေကြေး ဆိုင်ရာဟောပြောပွဲများ၊ နည်းပညာဟောပြောပွဲများ ပြည်တွင်း၌ပင် မကြာခဏပြုလုပ်လာမှုနှင့် တိုးတက်လာနေသည့် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုပုံစံ ပြောင်းလဲလာမှုတို့ကြောင့် လူအများစုကစိတ်ဝင်စားခြင်း မရှိသေးသော်လည်း လူနည်းစုက အဆိုပါ Cryptocurrency Coin များအပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တစ်ခုအနေဖြင့် အကျိုးအမြတ်များများရမည်ဟုထင်ကာ စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် Coin များထုပ်လုပ်သည်ကို နည်းပညာအခေါ်အရ Minning ပြုလုပ်သည်(ခ) သတ္တုတူးဖေါ် သည်ဟု တင်စားခေါ်ဆိုမှုတွင် ကိုယ်ပိုင်အမည်တပ်၍ Cryptocurrency Coin ထုတ်လုပ်ခြင်း မရှိဘဲ Minning အလုပ်ကိုသာ ပြုလုပ်နေသည့် Minning Company များလည်းရှိပြီး ယင်းပြည်ပ Company များမှ ထုတ်လုပ်သည့် Cryptocurrency Coin များကိုလည်း Package အလိုက် စျေးနှုန်းသတ်မှတ်၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ Multi Level Marketing (MLM) စနစ့်သုံး၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသဖွယ် စည်းရုံးဟောပြောကာ လောင်းကစားဆန်ဆန်၊ စတော့ရှယ်ယာ ဆန်ဆန်အဖြစ်ဖြင့် ပြောဆိုကာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရောင်းဝယ်လာနေသည်ကိုလည်း မြင်တွေ့ရ ပါသည်။
Cryptocurrency Coin များမှာကွန်ပျူတာနည်းပညာများအပေါ်၌အခြေခံပြီး အင်တာနက် အပေါ်၌သာ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်သည့် အကောင်အထည်ဆုပ်ကိုင်မပြနိုင်သော ငွေကြေးစနစ် တစ်ခုဖြစ်သဖြင့်အချိန်အခမရွေးနည်းပညာ၏အားနည်းချက်ကြောင့်မှားယွင်းမှု၊လိမ်လည်မှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ပျောက်ပျက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သလို သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု များ အပါအ၀င်တရားမဝင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှရရှိသည့် ငွေများကိုငွေကြေးခဝါချမှု (Money Laundering)နှင့် အကြမ်းဖက်မှုထောက်ပံ့ခြင်း(Aids to Terrorist) များတွင် အသုံးချ ပြုလာနိုင်သည်ကိုလည်းတာ၀န်ရှိသူများ သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံများတွင် Cryptocurrency ဒီဂျစ်တယ်လ်ငွေကြေးများအား သုံးစွဲနေသော်လည်း နည်းပညာလုံခြုံမှု အားနည်း ခြင်းကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို Online မှ ထိုးဖောက်ခံရပြီး ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်နေသည်ကို မြင်တွေ့နေရပါသည်။ လက်တလောအခြေအနေသတင်းများအရ-
(က) စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်က ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၉)ရက်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေးကဏ္ဍသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သူများအတွက် ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေ နိုင်သောကြောင့် bitcoin အပါအဝင် Digital Currency (ခ) cryptocurriencies များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် အထူးသတိထားကြရန် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန် ခဲ့ကြောင်း၊
(ခ) ဂျပန်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌ ဟာလူဟီကိုကူရိုဒါက ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက်က ဂျပန်ဗဟိုဘဏ်အစည်းအဝေး၌ bitcoin ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်နေခြင်းမှာ သွေးရိုး သားရိုး ဖြစ်စဉ်မဟုတ်နိုင်ကြောင်း၊ bitcoin သည် သမာရိုးကျငွေကြေးများကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ ဗဟိုဘဏ်တစ်ခုခု (သို့မဟုတ်) အစိုးရတစ်ရပ်ရပ်က ကျောထောက် နောက်ခံပြုပေးထားသော ငွေကြေးလည်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းအချက်အလက်များအရ လက်ရှိ (၅)လတာကာလအတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံ၌ သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေးဆိုင်ရာမှုခင်း(၁၇၀)ခန့်ရှိသည် ဟု ဖော်ပြထားကြောင်း၊
(ဂ) ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဗဟိုဘဏ်မှလည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက်က Bitcoin အပါအဝင် Ethreum ၊ Ripple နှင့် Litecoin အစရှိသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ အသုံးပြုခြင်းကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်း၊ Bitcoin အပါအဝင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေးများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိနိုင်ငံများမှ တရားဝင်ထုတ်လုပ်ထားသည့် ငွေကြေး များမဟုတ်ကြောင်း၊ အဆိုပါငွေကြေးများကို အရောင်းအဝယ်အလွှဲအပြောင်း ပြုလုပ် ခြင်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း၌ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထား သည့် ငွေကြေးများမဟုတ်သည့်အတွက် Bitcoin ၊ Ethreum ၊ Ripple နှင့် Litecoin အစရှိသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နေသည့်သတင်းကို ရရှိထားသဖြင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု များရှိပါက ဥပဒေကြောင်းအရ နစ်နာကြေးတောင်းခံပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများအား အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အလွှဲအပြောင်း ပြုလုပ်ခြင်း၊ အကူအညီပေးခြင်းနှင့် ကြော်ငြာပေးခြင်း အစရှိသည့်လုပ်ငန်းများကို ရှောင်ကြဉ်ကြရန် ဗဟိုဘဏ်မှ မေတ္တာရပ်ခံထားကြောင်း၊
(ဃ) တရုတ်နိုင်ငံ၌ bitcoin အပါအဝင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မှု အား ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ စတင်တားမြစ်ကာ တရားမဝင် ငွေကြေးအရောင်းအဝယ်များ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး အရေးယူမှုများစတင်ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေးအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့် Websiteများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် ထည့်သွင်း သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များနှင့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အားလုံးကို ပစ်မှတ် ထား၍ နှိမ်နှင်းမှုများစတင်ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး သို့သော် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး အသုံးပြုမှုများမှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့် တရုတ်အစိုးရမှ ယခု ကဲ့သို့ အရေးယူနှိမ်နှင်းမှုများ စတင်ပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေးအရောင်းအဝယ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကုမ္ပဏီများကို ဆက်လက် ပစ်မှတ်ထားအရေးယူသွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း၊
(င) အင်တာနက် Website များတွင်လည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိ ဗဟိုဘဏ်များ အပါ အဝင်ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ သတိပေးချက်များကြောင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ဈေးကွက်အပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကစိုးရိမ်လာကြသည့်အတွက် ခရစ္စမတ်အကြို ကာလတွင် ဒစ်ဂျစ် တယ်ငွေကြေးများ၏ တန်ဖိုးမှာအဆမတန်ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃)ရက်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများအနက် တန်ဖိုး အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော Bitcoin ၏ တန်ဖိုးမှာ (၁၃ %)ကျဆင်းခဲ့ပြီး (၁)ယူနစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၃,၃၆၇)ဒေါ်လာဖြင့် ဈေးပိတ်သွားခဲ့ကြောင်း၊ အလားတူ ဒုတိယတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် Ethereum တန်ဖိုးမှာလည်း (၁၂ %)ကျ ဆင်းကာ (၁)ယူနစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၆၆၃.၇၇)ဒေါ်လာဖြင့် ဈေးပိတ်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အပြင် အခြားရေပန်းစားသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး(၁၀)မျိုး၏တန်ဖိုးမှာလည်း (၁၉ %)အထိကျဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများတန်ဖိုး ကျဆင်းမှုကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဈေးကွက်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသူများ မှာ စိုးရိမ်လျက်ရှိနေကြောင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဈေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၆၀) ဘီလီယံကျော်ရှိကြောင်း၊
(စ) ထိုင်းနိုင်ငံ၌Bitcoin အပါအဝင် ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများအသုံးပြု၍ ငွေကြေးခဝါချ နေခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအိတ်ချိန်း လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် နေ့စဉ်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေး အရောင်းအဝယ်အလွှဲအပြောင်းကိစ္စများကို ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ထံ မဖြစ်မနေသတင်းပို့ရမည်ဟု ထိုင်းအစိုးရက အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း၊
(ဆ) ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအိတ်ချိန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Coincheck အား ဟက်ကာများက ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၆)ရက်တွင် ဝင်ရောက်ထိုးဖောက် ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅၃၄)သန်းတန်ဖိုးရှိ ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို ခိုးယူသွား ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ပြီးနောက် ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအိတ်ချိန်းများ၌ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို အထူးဂရုပြုကြရန် ဂျပန်အစိုးရမှ ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် လူပေါင်း (၂၆၀၀၀၀)ဦးခန့်မှာ ငွေကြေးဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊
(ဇ) လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာဖြစ်သည့် Facebook သည် Bitcoin အပါအဝင် ဒီဂျစ်တယ် ငွေကြေးများနှင့်ပတ်သက်သည့် Page များ၊ ကြော်ငြာများအား Facebook များ ပေါ်တွင် ဖော်ပြခြင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၀)ရက်မှစတင်၍ တားမြစ် ပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများနှင့်ပတ်သက်၍ Facebook မှ ထုတ်ပြန် သည့်ကြေညာချက်၌ Facebook စာမျက်နှာပေါ်ရှိ ကြော်ငြာများသည် ပြည်သူများ အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံမူကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် ဖော်ပြချက်များဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ Facebook သည် လူထုကိုအကျိုးပြုနိုင်ရန် တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လူထုအကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေနိုင်သော၊ လူထုအားလမ်းလွှဲသို့ ရောက်ရှိ စေနိုင်သော ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကြော်ငြာများ၊ ရေးသားချက် များကို တင်ပြခွင့်ပြုတော့မည်မဟုတ်ဟု ဖော်ပြထားကြောင်း၊ Facebook ၏ ကြေညာချက်မထွက်ပေါ်မီက တစ်ယူနစ်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၁၀၀၀၀)အထက်၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော Bitcoin စျေးနူန်းသည် Facebook ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်ပြီးနောက် တွင် တစ်ယူနစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၉၈၁၇)သို့ ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ ဇန်နဝါရီလ အတွင်း Bitcoin တန်ဖိုးမှာ (၃၁ %)ကျဆင်းခဲ့ပြီး အခြားလူသုံးများသော ဒီဂျစ်တယ်လ်ငွေကြေးများဖြစ်သည့် Ripple , Ethereum နှင့် Lifecoin တန်ဖိုးများ မှာ (၂ %)ခန့် ကျဆင်းခဲ့ကြောင်းဖြင့်အသီးသီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းလွန်ခဲ့သည့်(၄/၅) ခုနှစ်ခန့်မှစ၍ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုများပြားလာပြီးနောက် Online Website များ၊ Facebook လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲမှုများလာကာ Financial Technology (Fintech) အသုံးအနှုန်းများပါ လူထုအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ Financial နှင့်ပတ်သက်သည့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီအချို့မှ ဦးဆောင်၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ပညာရှင်များ ပူးပေါင်းကာ Fintech ဟောပြောပွဲများ ပြည်တွင်း၌ မကြာခဏပြုလုပ်လာကြသဖြင့် Online Shopping လုပ်ငန်းများလည်း ကျယ်ပြန့်များပြားလာခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ Online သုံးစွဲဝယ်ယူ ရာတွင် အသုံးပြုသည့် Visa Card ၊ Master Card ၊ Paypal Card အစရှိသည်များကိုပါ သုံးစွဲတတ်လာပါသည်။ အဆိုပါကတ်များနှင့်အတူ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့် Cryptocurrency ဒီဂျစ်တယ်လ်ငွေကြေးတစ်မျိုးဖြစ်သည့် Bitcoin ကိုပါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသိများလာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က Bitcoin တစ်ယူနစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၄၅)ဒေါ်လာခန့်ဖြစ်ရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်ပိုင်းခန့်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၈၀၀၀)အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ခုနှစ် နှစ်စပိုင်းလက်ရှိ အခြေအချိန်တွင်လည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၀၀၀၀)ဝန်းကျင်ခန့်တွင် စျေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် စီးပွားရေးစိတ်ဝင်စားသူများကပါသေသေချာချာမလေ့လာဘဲ ၀ယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင် အကျိုးအမြတ် ရမည်အထင်ဖြင့် လုပ်ဆောင်လာမှုများရှိနေပါသည်။ အဆိုပါအခြေအနေကို အသုံးချကာ နည်းပညာ နှင့်ပတ်သက်၍ အကျွမ်းတဝင်မရှိသေးဘဲ ခေတ်နောက်ကျကျန်နေသေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ သည် မိမိတို့နှင့် မနီးစပ်သေးသည့် လုပ်ငန်းများအပေါ် ဗဟုသုတအနေဖြင့်သာ လေ့လာသင့် ပါသည်။ Bitcoin ၏ လူသုံးစွဲမှုများပြားမှုကြောင့် စျေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကို အကြောင်းပြ၍ ၎င်းနှင့်အလား သဏ္ဍာန်တူဆင်တူရိုးမှား Coin များလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ နိုင်ငံခြားသား များပါဝင်သည့် ပြည်ပနိုင်ငံအခြေစိုက် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကုမ္ပဏီများ လာရောက်ကာ Multi Level Marketing ပုံစံမျိုး ဆင့်ပွားစနစ်အသုံးပြု၍ စျေးကွက်ရှာလုပ်ကိုင်မှုများရှိလာပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ နည်းပညာ နားလည်သူထက် နားမလည်ဘဲ စည်းရုံးရလွယ်ကူသည့်၊ နည်းပညာဗဟုသုတ နည်းပါး သည့် နယ်ဒေသများသို့သွားရောက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေရန် စည်းရုံးလုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့မြင် နေရပါသည်။ ပြည်တွင်း၌လည်း အင်တာနက် Website များပေါ်ရှိ Coin Market Cap ၊ World Coin Index ၊ Cryptocurrency Market Capital တို့တွင် ဖော်ပြနေသည့် Bitcoin ကဲ့သို့သော စျေးကွက်ဝင် Initial Coin Offering (ICO) Coin (၁၀)မျိုးခန့်နှင့် စျေးကွက်မဖွင့်သေးသည့် Pre Initial Coin Offering(Pre ICO) Coin (၄/၅)မျိုးခန့်လည်း အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဆောင်မှု များရှိနေပြီး ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ခြင်း၊ မက်လုံးပေးစည်းရုံးပြောဆိုမှုများကိုလည်း မြင်တွေ့နေရ ကြောင်း၊ မည်သည့်အစိုးရ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကျောထောက်နောက်ခံမရှိဘဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း တစ်ခုကို ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက လေ့လာသုံးသပ်စဉ်းစားဆင်ခြင်သင့်ပါသည်။
Cryptocurrency (ခ) Digital Currency (ခ) Coin ဒီဂျစ်တယ်လ်ငွေကြေးများအား အစိုးရ တစ်ခုခုက ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားခြင်းမရှိဘဲ လွတ်လပ်ခြင်း၊ အနှောင်အဖွဲ့ကင်းခြင်းကို အကြောင်းပြုကာလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သဖြင့် အယုံလွယ်သူ၊ လောဘကြီးသူ၊ ဗဟုသုတနည်းပါးသူများ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများအချိန် မရွေးဖြစ်လာနိုင်သလို ထိုမှတစ်ဆင့် ရိုက်ခတ်ကာ နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေး ကဏ္ဍကို အထိုက်အလျောက်ထိခိုက်ရိုက်ခတ်လာနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါနိုင်ငံများ အတွင်း ဖြစ်စဉ်များအား နမူနာယူ၍ ယနေ့တိုးတက်လာနေသည့် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာနည်းပညာ (Financial Technology) ခေတ်တွင် ဒီဂျစ်တယ်လ်ငွေကြေးမှာ သတိပြုဆင်ခြင်နိုင်စရာတစ်ခု အဖြစ် လောဘမကြီး၊ အယုံမလွယ်ဘဲ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်စရာအကြောင်းအရာဖြစ်ကြောင်း ဗဟုသုတ တစ်ရပ်အနေဖြင့် အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
Comments Off on ခရစ်တိုငွေကြေး(Cryptocurrency) ဘာလဲ ဘယ်လဲ
ခရစ်တိုငွေကြေး(Cryptocurrency) ဘာလဲ ဘယ်လဲ
၁။ ငွေကြေးဆိုတာ မိမိတို့၏ယုံကြည်မှုအား အပ်နှံထားသည့်အရာတစ်ခုအဖြစ် လက်ခံထားကြသည်။ ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်တိုင်းတွင် လူအများစုသည် ငွေသား(Cash)ဖြင့်သာ ပေးချေချင်ကြသည့်ဓလေ့မှသည် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာနည်းပညာများ(Financial Technology)မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ သမရိုးကျ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများအား ခေတ်မီနည်းပညာများနှင့်အစားထိုးကာ ဘဏ်စနစ်များ တစ်ဖြေးဖြေး ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာသည့်အခါ ငွေသားအစား Cheque လက်မှတ်သုံးစွဲပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Credit & bit Card ၊ Prepaid Card ၊ MPU Card ၊ Master Card ၊ Union Pay Card စသည့် ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် ပေးချေလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကို အင်တာနက်ဘဏ်စနစ် (Internet Banking)၊ မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်(Mobile Banking)လို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာနေကြကြောင်း၊ ဒီဂျစ်တယ် ငွေကြေးရဲ့အစမှာ Crypto-currency (ခ) လျှို့ဝှက်ငွေကြေးလို့ပြောလိုက်ရင် လူအများစုက Bitcion ကိုသာ ပြေးမြင်လိုက်သည်ကများနေသည်။ Bitcion သည် လျှို့ဝှက်ငွေကြေးအစ ကနဦးစတင်ပေါ်ထွက်လာသည့် ငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ လက်ရှိ Bitcion အား အကြောင်းပြု၍ နောက်ဆက်တွဲဈေးကွက်၏ ခရစ်တိုငွေကြေးအမျိုးအစားပေါင်း (၁၅၅၀) ကျော်ခန့် ပေါ်ထွက်ရှိနေသလို ဈေးကွက်မဝင်သေးဘဲ ပြင်ဆင်နေသည့်အဆင့်၌ရှိနေပြီး ခရစ်တိုငွေကြေး အသိုက်အဝန်းအတွင်း ဘောင်မဝင်အဆင့်၌သာရှိ နေသေးသည့် Crypto-currency Pre Coin များလည်း အများအပြားရှိနေပါသည်။
၂။ ခရစ်တိုငွေကြေးဖြစ်ပေါ်လာသည့်သမိုင်းကြောင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ပုံကို ပြန်လည်လေ့လာ ကြည့်မည်ဆိုပါက ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ Bitcion ဆိုသည့် ခရစ်တိုငွေကြေးတစ်မျိုးစတင်ပေါ်လာပြီး၊ ကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုအခြေခံ၍ Blockchain နည်းပညာအား အသုံးပြုထားသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ လုံခြုံမှုရှိပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်ဟု နည်းပညာရှင်တစ်ချို့က သုံးသပ်ထားကာ Blockchain မှာ Bitcion နှင့်ပါတ်သက်၍ ရောင်းသူ/ဝယ်သူ၊ ငွေပေးချေသူ/ငွေလက်ခံသူတို့အကြား လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် Program ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်နည်းဆိုသော် ဒီဂျစ်တယ်စာရင်းစာအုပ်(Digital Ledger) ဖြစ်ပါသည်။ IT နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူများသည် Blockchain ထဲသို့ဝင်ရောက်၍ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကို Minning လုပ်သည်ဟု နည်းပညာအရခေါ်ဆိုကျပြီး အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ဝန်ဆောင်ခအနေဖြင့် Coin များကို လက်ခံရရှိပါသည်။ ခရစ်တိုငွေကြေးများအား အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် ကြားခံပွဲစားလို့ခေါ်သည့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးကောင်တာများနှင့် သဘောတရားတူသော Exchanger (Crypto-currency Exchange) များလည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
၃။ ခရစ်တိုငွေကြေးများမှာ ပြင်ပကမ္ဘာတွင်သုံးစွဲနေတဲ့ငွေကြေးမဟုတ်သလို နိုင်ငံတွေ၊ အစိုးရတွေက တာဝန်ယူအာမခံပေးထားသည့်ငွေကြေးလည်းမဟုတ်ဘဲ Online ပေါ်တွင်သာပြုလုပ်သည့် အရောင်းအဝယ် ကိစ္စတွေကို ဖြေရှင်းဖို့တီထွင်ထားသည့် ကွန်ပျူတာလျှို့ဝှက်ကုတ်သုံး ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် Bitcion သည် အောင်မြင်ဆုံးသောခရစ်တိုငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်းအား လဲလှယ် နိုင်သည့် Exchanger (Crypto-currency Exchange) များမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင် ဉရောပတိုက်၊ အာရှတိုက်ရှိ ဂျပန်နိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံအများအပြားတွင်ရှိနေပါသည်။ လက်ရှိ Bitcion တစ်ယူနစ်(ခ)1-Coin တန်ဘိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၆၇၀၀) ဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေကြောင်း၊ ခရစ်တိုငွေကြေးများမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ မည်သည့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ ကျောထောက်နောက်ခံပြု ထားခြင်း၊ အာမခံပေးထားခြင်းတို့မရှိဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်အနှောင်အဖွဲ့ကင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမှာ စီးပွားရေးနယ်ပယ် လောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်တော့ မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း၊ သို့သော် Bitcion နှင့် ပါတ်သက်နေသည့် လက်ခံအသုံးပြုနေခြင်း (သို့မဟုတ်) မိတ်ဖက်အဖြစ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော Microsoft ၊ Dell ၊ WordPress အစရှိသည့် နည်းပညာကုမ္ပဏီများရှိနေသလို Cheap Air.com လို ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများ၊ Square ၊ Braintree ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများလည်း ရှိနေကြောင်း၊ Bitcion ၏ စျေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု(Market Cap) အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ (၁၈၀)ခန့်ရှိနေကာ ကုန်သွယ်မှုတန်ဘိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၄) ဘီလီယံခန့်ရှိသည်ဟု ပညာရှင်များက တွက်ချက်ထားသည်။ Bitcion အနေဖြင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ ယူနစ်(၂၂)သန်း လည်ပတ်ရန်သတ်မှတ်ထားပြီး လက်ရှိတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့် ယူနစ်စုစုပေါင်း(၁၆.၉) သန်းခန့်လည်ပါတ်နေကြောင်း သိရပါသည်။
၄။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြား၌လည်း ခရစ်တိုငွေကြေးအခက်အခဲပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်နေလျက်ရှိရာ အစိုးရများအနေဖြင့် တားမြစ်ပိတ်ပင်ရန် စဉ်းစားစောင့်ကြပ်နေလျက်ရှိနေကြောင်း၊ အဆိုပါ အခက် အခဲများအနက် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးက အဓိကကျနေသည့် ဒီဂျစ်တယ်အိတ်ချိန်းများ လုံခြုံမှုနှင့်နည်းပညာ မြင့်မားမှုရှိစေရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ခရစ်တိုငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်၍ ငွေကြေးခဝါချမှုများ၊ အခွန်တိမ်းရှောင်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုခင်းများအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများ၊ Online တွင်ရောင်းချသည့် တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအား ဝယ်ယူခြင်းတို့အား ပြုလုပ်လာနိုင်ပြီး ယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံး Crypto-currency Exchange တစ်ခုဖြစ်သည့် Coin Check အား ဟက်ကာများက အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၃၄) သန်းတန်ဘိုးရှိ ခရစ်တိုငွေကြေးများအား ခိုးယူသွားမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူပေါင်း၂၆၀၀၀၀ ကျော် နစ်နာဆုံးရှုံးသွား ခဲ့မှုအပေါ် ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို အဓိကဂရုပြုရန် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ အလားတူ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ဝါရှင်တန်မြို့ရှိ ကမ္ဘာ့ဘဏ် အစည်းအဝေးတစ်ခု၌ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဌမှလည်း ခရစ်တိုငွေကြေးအများစုမှာ Ponzi Schemes ကဲ့သို့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေခြင်းမရှိဘဲ လိမ်ညာဟန်ဆောင်၍ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများအား ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် မူလအဆင့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသူများအား ထပ်မံ၍ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် လာရောက်သူများထံမှရရှိသော ငွေကြေးအရင်းအနှီးများအား အသုံးပြု သုံးစွဲအမြတ်ထုတ် မသမာမှုများ ဖြစ်နေကြောင်းဟုပြောဆိုခဲ့သဖြင့် ခရစ်တိုငွေကြေးတန်ဘိုးများ ကျဆင်းလာကာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားသူလျော့နည်းသွားခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှ ထုတ်ဝေတော့မည့် ပတ်ထရိုငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်မှ တားမြစ်ပိတ်ပင်မည်ဖြစ်ရာ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက် များကို ကြိုတင်ဝယ်ယူထားသည့် ပြည်သူများသာ ထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်း၊ အလားတူ အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်ဗဟိုဘဏ်တို့မှလည်း ဧပြီလ(၆)ရက်တွင် ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို တရားမဝင်ငွေကြေး များအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး ယင်းငွေကြေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်နွယ်မှုမပြုလုပ်ရန်၊ ပြုလုပ်ပါက တရားစွဲဆိုခြင်းခံရမည်ဟု ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်ပြီးနောက် Bitcoin တန်ဘိုးများ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ ယခုတလော နည်းပညာနယ်ပယ်အတွင်း၌ Online ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကွန်ပျုတာများကို Patya ဟုခေါ်သည့် Ransomware Virus တစ်မျိုးပေါ်လာပြီး Window Operation System ထဲဝင်ရောက်ကာ Computer Data အားလုံးအား Encrypt (ကွန်ပျုတာ အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား သက်ဆိုင်သူများသာ ဖတ်ရှုနားလည်နိုင်သည့် စကားဝှက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း) ပြုလုပ်ပြီး Dataများ ပြန်လိုချင်ရင် ငွေပေးမှ Decrypt (အချက်အလက်များအား ပြန်လည်ပြောင်းလဲပေးမည်) လုပ်ပေးမည်ဟုဆိုကာ နည်းပညာဖြင့် ချိန်းခြောက်နေသည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်ဟု သတင်းများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းမှာလည်း ခရစ်တိုငွေကြေးအား စိတ်ဝင်စားပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်သူများအတွက် စဉ်းစားရမည့် အကြောင်းအရာများ ပင်ဖြစ် သည်။
၅။ ခရစ်တိုငွေကြေးအား ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန်စိတ်ဝင်စားပါက အနိမ့်ဆုံးအင်တာနက်နည်းပညာကို နားလည်သုံးစွဲတတ်ရမည်ဖြစ်သလို ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာသဘောတရားတွေ၊ အသုံးအနှုန်းတွေသိထားပြီး အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်သည့် အထွေထွေဗဟုသုတများကို နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ခရစ်တိုငွေကြေးလုပ်ငန်းများအား အဓိကလုပ်ဆောင်နေသူအများစုမှာ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ပြီးသည့်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများ၌သာအခြေပြုထားကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဥပဒေစိုးမိုးမှု လက်လှမ်းမမှီနိုင်သည့် British Island နှင့် America Island လိုနေရာမျိုးတွင် အခြေတည်ထား ကြကြောင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် မိမိနေထိုင်ရာနိုင်ငံအတွင်း၌ တည်ရှိဖြစ်တည်ခြင်းမဟုတ် ကြောင်းကို သတိပြုထားမှာဖြစ်သည်။ ခရစ်တိုငွေကြေး၌ အမျိုးအစား(၂)မျိုးရှိပါကြောင်း၊ တစ်မျိုးမှာ ဈေးကွက်ဝင်နေသည့် Bitcoin ၊ Ethereun coin တို့လိုဖြစ်ပြီး၊ ကျန်တစ်မျိုးမှာ ဈေးကွက်မဝင်သေးဘဲ ပြင်ဆင်နေသည့်အဆင့်၌သာရှိနေပြီး ခရစ်တိုငွေကြေးအသိုက်အဝင်းအတွင်း ဘောင်မဝင် Pre အဆင့်၌ ရှိသည့် Coin များဖြစ်သည်ကိုလည်း သိနားလည်ဖို့လည်းလိုသည်။ အချို့ကလည်း ဈေးကွက်အသာစီးရ ထားပြီး ဈေးကွက်ဝင်သည့် Bitcoin ၊ Etherum coin တို့အား ရင်းနှီးမြှပ်နှံကြသလို အချို့ကတော့ ဈေးသက်သာပြီး မကြာမီဈေးကွက်ဝင်နိုင်မည်ဟုထင်ကြေးဖြင့် ဈေးကွက်မဝင်သည့် Coin များကို ဝယ်ယူကြကြောင်း၊ နားမလည်သူအများစုက အဆိုပါလုပ်ငန်းအား အင်တာနက်ကြည့်ပြီး လက်ကိုင်ဖုန်း ခလုပ်နှိပ်လိုက်ရုံနှင့် လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ရသည်ဟု ထင်နေကြကြောင်း၊ ပြောသလောက်မလွယ်ကူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ခရစ်တိုငွေကြေးနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဝင်ဥပဒေများအရရော ငွေရေးကြေးရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရပါ ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပါ။
၆။ ခရစ်တိုငွေကြေးများအား စိတ်ဝင်စားသူအများစုက စတော့ရှယ်ယာလိုသဘောထားပြီး အဓိကဝယ်ယူစုဆောင်းခြင်းဖြင့် စျေးတက်လျှင်မြတ်မည် မြတ်လျှင်ပြန်ရောင်းမည်၊ တက်ဈေးကို မျှော်လုပ်ကြပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းအား နယ်ဒေသများတွင် နေထိုင်သူအများစုကသာ စိတ်ဝင်စား လုပ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ကိုလည်း တွေ့မြင်နေရသည်။ ကျောထောက်နောက်ခံမရှိ ခိုင်မာမှုမရှိဘဲ ဖြစ်နေသည့် ခရစ်တိုငွေကြေးအား သေချာနားလည်ခြင်းမရှိ ယုံကြည်မှုတစ်ခုဖြင့်သာ ထိတွေ့ရင်းနှီးကြရန် မလုပ်သင့်ပါကြောင်း၊ အရှုံးဖြင့်သာရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိကြောင်း၊ ဥပမာပြောရရင် ကျူးကျော်တဲကို ဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနဲ့တူကြောင်း၊ အစားပြန်ရ/မရ မကျိန်းသေ မသေချာသော်လည်း ကျူးကျော်တဲတွေကို ဘယ်အချိန်အဖျက်ခံရမယ်ဆိုတာက အရင်ဆုံးတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်သလို၊ ကံယုံပြီးကြိုးတန်းပေါ် လမ်းလျှောက်တာနှင့်လည်းတူနေမည်ကိုလည်း သတိချပ်သင့်ပါသည်။
၇။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း ခရစ်တိုငွေကြေးများနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ခန့်မှစ၍ ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအချို့မှလည်း ကိုယ်စားလှယ်ပုံစံမျိုးဖြင့် Coin များကို ဝယ်ယူရင်နှီး စုဆောင်းကြရန် စည်းရုံးဟောပြောပွဲများလုပ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်နေရပါသည်။ ခရစ်တို ငွေကြေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ဟောပြော စည်းရုံးရာတွင် အောင်မြင်နေသော ခရစ်တိုငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်သည့် Bitcoin အား စံနမူထား၍ စျေးကွက်စတင် ကတည်းက ဝယ်ယူ၍ အကျိုးအမြတ်ရနေမှုကိုသာ အဓိကထားကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လာစေရန် မက်လုံးပေးပြီး ပြောဆိုနေကြပါသည်။ ထို့အပြင်ခရစ်တိုငွေကြေးများသည် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့် ၍ သယ်ယူသွားစရာမလို၊ ဘယ်ဘဏ်နှင့်မှပါတ်သက်အသိပေးရန်မလို၊ မည်သည့်ဗဟိုဘဏ်ကိုမှ အကြောင်းကြားရန်မလိုသည့် လွတ်လပ်သော ငွေကြေးပုံစံစနစ်သစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း၌ အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် Bitcoin (၁၃၀၉) ယူနစ်စျေးနှုန်းဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် တစ်ယူနစ်လျှင် တစ်ဒေါ်လာသာဖြစ်နေခဲ့ရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဒေါ်လာ (၁၈၀၀၀)ထိ အမြင့်ဆုံးဈေး ဖြစ်ခဲ့သဖြင့် ဝယ်ယူထားသူများ အဆမတန်အကျိုးအမြတ်များရသွားပြီး ချမ်းသာသွားခဲ့ကြကြောင်း၊ ယခု Bitcoin အား ဝယ်ယူရင်းနှီးမည်ဆိုပါက အရင်းအနှီးအလွန်များပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အစကနဦးဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်မဝင်သေးဘဲ ပြင်ဆင်နေသည့်အဆင့်၌သာရှိနေသော Pre အဆင့်ရှိ Coin များအား စျေးနည်းနည်းဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ကြိုတင်ဝယ်ယူစုဆောင်းထားလျှင် အနာဂတ်၏ မဆုံးနိုင်သောရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖြင့် မက်လုံးပေးစကားလုံးများသုံးစွဲကာ နိုင်ငံခြားသားများကိုယ်တိုင်ပါဝင်သည့်ဟောပြောပွဲများကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာလုပ်ပြ၍ အဖွဲ့ဝင်များ စုဆောင်းလုပ်ဆောင်နေသည်မှာ မျက်မြင်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် ခရစ်တိုငွေကြေးများအား အနာဂတ်၏ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတစ်ခုလို စိတ်ထဲတွင်တွေးထင်မြင်လာကာ လွယ်ကူစွာနှင့်ပင်စည်းရုံးခံရသည့် သဘောမျိုးဖြစ်လာနေကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ခရစ်တို ငွေကြေးများနှင့်ပတ်သက်၍ ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေ၊ Crypto-currency Exchange နှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေခံအဆောက်အဦများမရှိ၊ ငွေကြေးလည်ပတ်စီးဆင်းနေမှု အခြေအနေတို့မှာ များစွာနောက်ကျနေသေးကြောင်း၊ အနာဂတ်၏ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတစ်ခုဟုပြောဆိုရာတွင် ပြည်တွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလိုမဟုတ်ဘဲ ခြေခြေမြစ်မြစ်မသိရသည့် ပြည်ပနိုင်ငံရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို အဆုံးရှုံးခံနိုင်ရင်လုပ်ဆိုသည့် သဘောမျိုးဖြစ်နေပါသည်။ အဆုံးအရှုံးခံနိုင်ရင်လုပ် ဆိုသည့်စကားအတိုင်း ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ ခရစ်တိုငွေကြေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ Coin ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ပြည်ပရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အဆက်အသွယ်မရတော့ဘဲ ဝယ်ယူပေးသွင်း ထားသည့်ငွေများ ထုတ်မရတော့သည့်ဖြစ်စဉ် လတ်တလောဖြစ်ပွားနေကြောင်း၊ လိမ်လည်သွားသည့် အခြေအနေမျိုး ဟုတ်မဟုတ်မသိရသေးဘဲ အကယ်၍ ငွေကြေးများဆုံးရှုံးသွားပါက ဘယ်သူက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမှာလည်းဆိုသည့် မေးခွန်းရှိနေသော်လည်း အဖြေမှာ ဘယ်သူမှတာဝန်မခံပါ မိမိသဘောကျလို့လုပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်၍ မိမိတာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
၈။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တိုငွေကြေးများသည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြစ်သည့် Blockchain နည်းပညာကိုပဲသုံးသုံး၊ လွတ်လပ်သောငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ငွေပို့ခသက်သာသည ်ပဲပြောပြော၊ လုံခြုံပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိတယ်လို့ပဲထင်ထင်၊ လက်ရှိအနေဖြင့် (Crypto-currency) ခရစ်တို ငွေကြေးနှင့်ပါတ်သက်၍ ဗဟုသုတပြည့်စုံအောင်လေ့လာပြီးမှသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက ်သင့်ပြီး ခါတော်မီစီးပွားရေးလို ကံကိုယုံပြီး ကျူးကျော်တဲကို ဝယ်မိသူတစ်ဦးလိုတော့ မရင်းနှီးသင့်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ခရစ်တိုငွေကြေးများအား အသုံးပြုရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာနိုင်သည့် ကောင်းကျိုးများရှိနေသော်လည်း ယင်းကြောင့် နိုင်ငံအချို့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးတရားများနှင့် အကြောင်းတရားများကို သတိထားသင့်သလို လက်ရှိအခြေအနေတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ Crypto-currency (ခ) ခရစ်တိုငွေကြေးများနှင့်ပတ်သက်၍ ငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား တရားဝင်ဥပဒေအရ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသည်ကို သိရှိထားပြီးနောက် ခရစ်တိုငွေကြေးစိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့်လည်း ဘာလုပ်မှာလဲ ဘယ်လိုဆက်သွားမှာလဲဟု စေတနာအရင်းခံ၍ အများအကျိုးအတွက် ဝေမျှလိုက်ရပါသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဂယက်ကြောင့် ကမ္ဘာ့ရေနံဝယ်လိုအား ဒုတိယအများဆုံးတရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေနံဝယ်ယူမှုကျဆင်းနေသည့်အတွက်ရေနံစျေးနှုန်းများလအတန်ကြာ ဆက်လက်အားပျော့ဖွယ်ရှိမှု